SAREE HACKS (၈) မျိုးကိုသင့်အားပါးလွှာအောင်ပြုလုပ်ရန် - ဟုတ်ကဲ့! ယခုဖြစ်နိုင်သည်။ - PAMPEREDPEOPLENY.COM - ဖက်ရှင်
Saree Hacks (၈) မျိုးကိုသင့်အားပါးလွှာအောင်ပြုလုပ်ရန် - ဟုတ်ကဲ့! ယခုဖြစ်နိုင်သည်။
နေအိမ် ဖက်ရှင် ခေတ်ရေစီးကြောင်း ဖက်ရှင်ခေတ်ရေစီးကြောင်း Kaustubha By Kaustubha Sharma က | မေလ 26, 2016 တွင်
လူတိုင်း saree ဝတ်ဆင်ရန်လိုသည်။ လူတိုင်း saree ချစ်တော်မူ၏။ အဘယ်ကြောင့်မ? ဒါဟာကျွန်တော်တို့ရဲ့နောက်ဆုံးယဉ်ကျေးမှုဆိုင်ရာကိုယ်စားပြုမှုပါပဲ။ တစ် ဦး saree သင် drop-dead အလွန်ကောင်းမွန်တဲ့ကြည့်ရှုစေနိုင်သည်နေစဉ်, ဒါကြောင့်လည်းသင်ကပိတ်ချောအမှိုက်ပုံ၌ပတ်ရစ် panda ကဲ့သို့သင်တို့ကိုဖြစ်စေနိုင်ပါတယ်။
လူအများစုက sarees သွားမယ့်အစား salwar ဝတ်စုံကိုပြောင်းသုံးတာကြောင့်ဖြစ်နိုင်တာပေါ့။ အကယ်၍ သင်သည်ရောင်စဉ်၏ပိုမိုကောင်းမွန်သောဘေးထွက်တွင်ကျရောက်ပါကသင့်အားကျွန်ုပ်တို့အပြည့်အဝနားလည်ပါသည်။
သူတို့ပြောတာကတော့ saree ဟာလူတိုင်းရဲ့လက်ဖက်ရည်ခွက်မဟုတ်ဘူး၊ ကျနော်တို့ saree အတွက်အလွန်ကောင်းမွန်တဲ့ပုံဖော်စေရုံသာမကပါးလွှာစေသည့် saree hack ၈ ခုကိုတွေ့ရှိပြီးပါပြီ။ ဟုတ်ကဲ့၊ အောက်မှာဖော်ပြထားတဲ့ရိုးရှင်းတဲ့ hack တွေကိုလိုက်နာခြင်းအားဖြင့် saree မှာပါးလွှာနေတာမျိုးဖြစ်နိုင်ပါတယ်။
အဆိုပါ Shani dosha အိမ်မှာကုစားဖယ်ရှားလိုက်ပါ
Hack 1: စတိုင်၌က Pin
တစ် ဦး saree အဘို့, အရေးအပါဆုံးအရာ draping နှင့်အတူစတင်သည်။ သငျသညျသပ်သပ်ရပ်ရပ် tuck မထားဘူးဆိုရင်, မလိုချင်တဲ့areaရိယာသငျသညျ unkempt ကြည့်ရှုထွက်ထွက်လာလိမ့်မယ်။ ဒီတော့ပထမစည်းမျဉ်းကသပ်သပ်ရပ်ရပ်ဖြစ်အောင်လုပ်ဖို့ပါ။ သင်၏ချစ်ခြင်းမေတ္တာလက်ကိုင်များကိုသင်ဖုံးကွယ်လိုပါကသင်၏ခါးတွင်ချိတ်ထားပါ။ သပ်သပ်ရပ်ရပ်နှင့်ချောချောမွေ့မွေ့ချောချောမွေ့မွေ့အသွင်အပြင်ကိုလုပ်ပါ။ လိုအပ်လျှင်အပိုတံသင်သုံးပါ။
Hack 2: အပြည့်အဝအင်္ကျီလက်တို
လူအများစုကအင်္ကျီသည် saree ၀ တ်နေစဉ်ဒုတိယအရေးအပါဆုံးအချက်ကိုလျစ်လျူရှုထားကြသည်။ သင့်လက်များကိုပိုမိုပါးလွှာစေရန်အပြည့် ၀ တ်အင်္ကျီကိုသွားယူပါ။
Hack 3: Saree အထည်
အသွင်အပြင်ကိုအလေးချိန်တိုးစေသောဝါဂွမ်းသို့မဟုတ်ပိုး saree သို့မဟုတ်အခြားအထည်ကိုရှောင်ပါ။ chiffon သို့မဟုတ် georgette ကဲ့သို့သောစီးသောအထည်ကိုသွားပါ။ ဤရွေ့ကားပိတ်ထည်စီးဆင်းသောဖြစ်ကြပြီးသပ်သပ်ရပ်ရပ်သင့်ရဲ့ကိုယ်ထည်အပေါ်ကျိန်းဝပ်။ ဤသည်လျောက်ပတ်သည်သင်၏ခါးဆစ်ကိုမြှင့်တင်ရန်ပါလိမ့်မယ်။
Hack 4: Thin Saree နယ်စပ်
သင့်ကိုကြီးမားလွန်းတဲ့အသွင်သဏ္andာန်ဖြစ်စေမယ့်လေးလံပြီးထူထပ်တဲ့ဘောင်ကိုသွားမယ့်အစား ပါးလွှာသော saree နယ်စပ်ကိုသွားပါ။
Hack 5: တစ် ဦး က Belly Chain
ဒီနေ့ခေတ်ရေစီးကြောင်း 60 ဝမ်းကွင်းဆက်! သင့်မှာဒီအတွက်သင့်တော်တဲ့ခါးတစ်ချောင်းရှိလို့သင်ဒီဟာကိုလုံးဝဆွဲထုတ်နိုင်ပါတယ်။ ထို့အပြင်၎င်းသည်သင်ဖုံးကွယ်လိုသည့်အခြားoffရိယာများကိုလည်းအာရုံစိုက်လိမ့်မည်။
Hack 6: တစ် ဦး က Fishcut Petticoat
ဖြောင့်သောဝါဂွမ်းအင်္ကျီကိုသွားမယ့်အစားငါးဖြတ်ဖို့သွားပါ အဘယ်ကြောင့်? ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့သူကခါးမှာရှိတဲ့အဆီတွေပုန်းနေအောင်ကူညီပေးမှာပါ၊
Hack 7: မှောင်ရိပ် Sarees
သူတို့ပြောသည့်အတိုင်းအနက်ရောင်သည်သင့်ကိုပိုမိုပါးလွှာစေသည်…အနက်ရောင်၊ အနီရောင်၊ မာရ်နတ်သည်သင်၏အရောင်များဖြစ်သည်။ ဤအရာသည်သင့်ကိုပါးလွှာသောအသွင်အပြင်ဖြင့်လှည့်စားနိုင်သည်။
Hack 8: မှော် Knickers!
မှော် knickers သွားပါ။ ၎င်းသည်သင်၏ပြည့်ဝနေသောလျှာကိုလျှို့ဝှက်ပေးပြီးသင့်အားပြီးပြည့်စုံသောကွေးပေးသည်။
ဤရိုးရှင်းသောနှင့်လုပ်နိုင် saree hack လုပ်ပါ။ လူတွေကိုသင့်ရဲ့ပါးလွှာသောမိမိကိုယ်ကိုလှည့်စားပါ။ ပြီးတော့မင်းတို့ဒီဆောင်းပါးကိုဘယ်လိုရှာတွေ့ပြီလဲ
မကြာမီ ... သင်နေ့စဉ်ဝတ်ဆင်ရန်သင်အသုံးပြုနိုင်သောဖက်ရှင် hack များပိုမိုလာသည်။
အိမျတျော၌ puja အခန်း၏ဒီဇိုင်း